Paikady votoaty Modular ho an'ny CMO mba hampihenana ny fandotoana nomerika | Martech Zone
Paikady votoaty Modular ho an'ny CMO mba hampihenana ny fandotoana nomerika
Alakamisy 17 martsa 2022 Zoma, Martsa 18, 2022 Ed Breault
Tokony hanafintohina anao izany, mety hampahatezitra anao mihitsy aza, raha mianatra izany 60-70% amin'ireo mpivarotra votoaty no mamorona mandeha tsy ampiasaina. Tsy vitan'ny hoe fandaniam-poana izany, midika izany fa tsy mamoaka stratejika na mizara votoaty ny ekipanao, mainka fa ny fanaovana azy manokana ho an'ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny foto-kevitra ny votoaty modular tsy zava-baovao – mbola misy izy io amin'ny maha-modely ara-kevitra azy fa tsy azo ampiharina amin'ny fikambanana maro. Ny antony iray dia ny toe-tsaina - ny fiovan'ny fandaminana izay takiana amin'ny fampiharana azy marina - ny iray hafa dia ny teknolojia.
Ny votoaty modular dia tsy tetika tokana fotsiny, fa tsy zavatra tokony ampidirina ao amin'ny maodely momba ny fizotran'ny famokarana votoaty na ny fomba fitantanana tetikasa ka mifototra amin'ny asa fotsiny. Mitaky fanoloran-tena eo amin'ny fandaminana ny fampivoarana ny fomba fiasan'ny votoaty sy ny ekipa mpamorona ankehitriny.
Ny atiny modular, vita tsara, dia afaka manova ny tsingerin'ny fiainan'ny atiny manontolo ary mampihena be ny dian-tongotrao amin'ny votoaty fandaniam-bola. Mampahafantatra sy manatsara ny fomba fiasan'ny ekipanao izany:
Manaova tetika, hevitra ary manomana votoaty
Mamorona, manangona, mampiasa indray, ary ampidiro ny votoaty
Architect, modely ary manara-maso votoaty
Araho, ary omeo fanazavana momba ny atiny ary ny fanentanana
Raha toa mampatahotra izany, dia diniho ny soa.
Forrester dia mitatitra fa ny fampiasana indray ny votoaty amin'ny alàlan'ny singa modular dia ahafahan'ny orinasa manangona traikefa nomerika - na manokana na eo an-toerana - haingana kokoa noho ny maodely nentim-paharazana amin'ny famokarana sy fitantanana votoaty. Tapitra ny andro niainan'ny votoaty tokana, na farafaharatsiny mila izany. Ny votoaty modular dia manampy amin'ny fanamorana ny fifampiresahana mitohy hatrany amin'ny alàlan'ny fifamatorana amin'ny votoaty amin'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny famelana ny ekipa hiara-miasa amin'ny votoaty tsirairay sy ny atiny mba hampifangaroana sy hampifangaro ireo traikefa isam-paritra na fantsona manokana ao anatin'ny ampahany kely amin'ny fotoana mety. .
Ny tena zava-dehibe dia ny votoaty dia mitsahatra tsy ho lasa mpivarotra sy mpanafaingana izay tokony ho izy. Nanonona an'i Forrester indray
Ny 70% amin'ny mpivarotra dia mandany eo anelanelan'ny adiny iray sy 14 isan-kerinandro amin'ny fanamboarana votoaty ho an'ny mpividy azy… [raha] 77% amin'ny mpivarotra B2B koa dia mitatitra fanamby lehibe mitondra ny fanjifana votoaty mety amin'ny mpihaino ivelany.
Tsy misy faly. Raha ny ambony:
Raha mandany 10% amin'ny vola miditra amin'ny varotra ny orinasa lehibe iray, dia ny vidin'ny atiny 20% hatramin'ny 40% amin'ny varotra, ary ny fampiasana indray dia tsy misy fiantraikany afa-tsy 10% amin'ny atiny isan-taona, efa misy tahiry an-tapitrisa dolara.
Ho an'ny CMO, ny olana lehibe indrindra amin'ny atiny dia:
Haingana mankany an-tsena – ahoana no ahafahantsika manararaotra ny fahafahan'ny tsena, mijery ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao fa mivily ihany koa rehefa misy tranga tsy ampoizina.
Manamaivana ny risika - Moa ve ny famoronana dia manana ny atiny efa nankatoavina mialoha izay ilainy ho vonona amin'ny fampihenana ny tsikera sy ny fankatoavana ary mahazo votoaty mifanaraka amin'ny marika sy mifanaraka amin'ny tsena ara-potoana? Ohatrinona ny vidin'ny laza ratsy? Traikefa iray ihany no ilaina mba hanovana ny sain'ny olona an-tapitrisany (voromailala).
Ahena ny fako – mpandoto nomerika ve ianao? Ahoana ny fijerinao ny mombamomba ny fako amin'ny resaka votoaty tsy ampiasaina? Mbola manaraka modely amin'ny tsingerin'ny fiainan'ny atiny lava sy andalana ve ianao?
Personalization azo scalable - Moa ve ny rafitray natao hanohanana ny fivorian'ny traikefa manokana mifototra amin'ny teny manodidina amin'ny fantsona mifototra amin'ny safidinao, ny tantaran'ny fividianana, ny faritra, na ny fiteny? Azonao atao ve ny manangana votoaty stratejika hampiasaina amin'ny fotoana ilana azy - ilay fotoana natao ho anao - fa miantoka ihany koa ny fanarahan-dalàna, ny marika ary ny fanaraha-maso ary ny fiantohana ny kalitao mandritra ny vanim-potoanan'ny votoaty tsy misy dingana mandreraka sy mandany fotoana?
Matokia amin'ny stack martech anao – Manana mpiara-miasa matanjaka amin'ny teknolojia sy tompon-daka amin'ny fandraharahana ve ianao? Ary, zava-dehibe ihany koa, mifanaraka amin'ny fitaovanao ve ny angonao? Efa nanao fanazaran-tena ve ianao mba hampiharihary ny antsipirian'ny maloto ary nanome toerana ho an'ny fitantanana sarotra sy fanovana fandaminana ilaina mba hampifanaraka ny teknolojia marketing amin'ny orinasa?
Ambonin'izany rehetra izany, ny lehiben'ny Marketing Officer (CMO) Ny asa dia ny mamindra ny marikao avy amin'ny antonony mankany amin'ny genius. Na mahomby ianao na tsia, ny fomba handehananao, dia fisaintsainana mivantana momba ny CMO mihitsy - ny fomba nitantanany ny renivohitra ara-politika, ny toerany ao amin'ny c-suite, ny fahafahany manapaka na manafoana ny tetikasa sy ny hafatra tsy nahomby, ary mazava ho azy ny fandaniam-poana, ary ny fomba fanaraha-maso sy fanoritsoritana izany rehetra izany amin'ny fahombiazan'ny ekipa sy ny orinasa.
Ny haingo, ny fahitana ary ny mangarahara takiana amin'ity fiovan'ny saina ity dia mihoatra ny famokarana votoaty sy traikefa nomerika. Ity maodely ity dia mitondra paikady ara-barotra votoaty misy tanjona sy tanjona ary votoaty avo lenta kokoa amin'ny fampiasana loharano vitsy kokoa, miaraka amin'ireo singa rehetra namboarina hanohanana ny traikefa tsirairay, ny votoaty bitika na ny blocs modularized anao, ka lasa fampitomboana hery hampiasa ny atiny tsara indrindra amin'ny mpihaino anao.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana votoaty modular ho toy ny mpanentana amin'ny fanovana, ho an'ny fomba fiasa vaovao, dia manangana izay tsy vitan'ny marika lehibe teo aloha ianao. Ary mihoatra noho ny scalability madiodio izany - manampy ny ekipanao hifantoka bebe kokoa amin'ny ho avy ianao, manandratra ny famoronanao ianao mba hampihenana ny fahasorenana sy ny fitakiana fandaminana. Mijoro amin'ny fanantitranterana ny votoaty izay manan-danja mitovy amin'ny vokatra sy serivisy amidinao ianao, ary farany, mametraka fanoloran-tena hanakana ny fako ianao ary hiantoka ny hafatrao, ny fahitanao ary ny maha-marika anao, don' t mahazo vahana amin'ny tabataban'ny loto nomerika.
Tags: aprimocmoandrom-piainanafamokarana atinyfitantanana tetikasa votoatyafa-po paikadyworkflow atinyvotoaty modularpaikady votoaty modularrepurpose atiny
Amin'ny maha Chief Marketing Officer, Ed Breault no tompon'andraikitra amin'ny Aprimo's marika sy fitomboana. Izy no mitondra ny paikadin'ny fikambanana B2B SaaS mankany amin'ny tsena miaraka amin'ny sokajy Digital Asset Management sy Marketing Resource Management. Manambatra ny fahaiza-manao ara-barotra amin'ny fitomboana izy miaraka amin'ny sehatra midadasika amin'ny fampivoarana marika ary ny fientanam-po amin'ny fampivoarana programa ara-barotra mifototra amin'ny kaonty izay manorina ny fahatsiarovan-tena, ny fanavahana, ny fangatahana ary ny fidiram-bola farany.
Terminology typography: Manomboka amin'ny Apex ka hatrany Swash ary ny Gadzook eo anelanelan'ny… Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny endritsoratra